09 4500 90 131, 01 661 229, 01 661 289, 09 431 901 99, 09 730 730 99
No.154 A2, Corner of Kaba Aye Pagoda Road & Gandamar Road,9Ward, Mayangone Township, Yangon.
Delivery time - 12:00 am to 17:00 pm
Service Open Daily
Weight limit is (1 Kilogram) and the measurement should be within 24" (length) x 24" (width) x 24" (height) will be calculated by dimension measure
3000 Kyats + Remote Areas 1000 Kyats
စာနှင့်ချောထုပ်များအား အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက် သယ်ယူပေးပြီး ပေးပို့လိုသည့်လိပ်စာသို့ သွားရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည့် နေ့ချင်းရောက် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ နံနက်(၈း၃ဝ)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂းဝဝ) အထိ လက်ခံပေးပြီး ပိတ်ရက်မရှိ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။လက်ခံထားသူအမည်ကိုလက်ခံထားပြီးသည်နှင့်အချိန်ပိုင်းအတွင်းပြန်လည််အကြောင်းကြားပေးပါသည်။ပုံမှန်အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားမှာ (၀.၅) ကီလိုဂရမ် နှင့် အလျား (၂၄)လက်မ၊ အနံ (၂၄)လက်မ၊ အမြင့် (၂၄) လက်မ အထိလက်ခံပါသည်။ အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ကြီးမားပါက အထူးနူန်းဖြင့်လက်ခံပါသည်။ စျေးနူန်းအနည်းဆုံး(၅၀၀၀)ကျပ်မှ စတင်ပြီး စာဝေနယ် ပြင်ပဧရိယာများအတွက် (၁၀၀၀)ကျပ်ပိုမိုကောက်ခံပါသည်။စာလက်မခံခြင်း၊လက်ခံမည့်သူမရှိခြင်း၊ လိပ်စာပြောင်းသောစာများအတွက် ငွေပြန်မအမ်းပါ။
Delivery time - 9:00 am to 17:00 pm
Weight limit is (0.5 Kilogram) and the measurement should be within 24" (length) x 24" (width) x 24" (height) will be calculated by dimension measure
2500 Kyats + Remote Areas 1000 Kyats
နောက်နေ့ ရောက် အမြန်ချောပို့စနစ်
စာနှင့်ချောထုပ်များအား အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက်သယ်ယူပေးပြီး ပေးပို့လိုသည့်လိပ်စာသို့ သွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည့် နောက်နေ့ရောက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ နံနက်(၈း၃ဝ)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂းဝဝ) အထိ လက်ခံ ပေးပြီးပိတ်ရက်မရှိ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။ လက်ခံထားသူ အမည်ကို လက်ခံထားပြီးသည်နှင့် အချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးပါသည်။ ပုံမှန် အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားမှာ (၀.၅ )ကီလိုဂရမ် နှင့် အလျား (၂၄)လက်မ၊ အနံ (၂၄)လက်မ၊ အမြင့် (၂၄)လက်မ အထိလက်ခံပါသည်။ အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ကြီးမားပါက အထူးနူန်းဖြင့် လက်ခံပါသည်။စျေးနူန်း အနည်းဆုံး (၂၅၀၀)ကျပ် မှစတင်ပြီး စာဝေနယ် ပြင်ပဧရိယာများအတွက်(၁၀၀၀)ကျပ်ပိုမိုကောက်ခံပါသည်။စာလက်မခံခြင်း၊လက်ခံမည့်သူမရှိခြင်း၊ လိပ်စာပြောင်းသော စာများအတွက် ငွေပြန်မအမ်းပါ။
Deliver within (2) or (3) days after collecting the shipment. Open six days inaweek (off on Sundays and also off on gazette holidays). We will provide delivery record to shipper. Delivery charges is (1500 – 1800 - 2000 Kyats per mail and will be more of the regular rate for Hlaing Tharyar, Shwe Pyithar, Dagon Myothit (South, North), Mingaladon. Customers must pack and the destination address should be written on the package and mails. We will collect the shipment for free of charge. Weight limit is (500)gms and the measurement should be within 12" (length) x 10" (width) x 0.5" (height). Not refundable for shipment for the wrong address and consignee already moved to another place.
Rate - 1500-1800-20000 Kyats per envelope for service area
RAF (500 Kyats per mail)
Minimum (50 Mails)
အဆင့်မြင့် ဦးစားပေးအမြန်ချောစာပို့စနစ် (စာစောင်အရေတွက် ၅၀ နှင့် အထက်)
လူကြီးမင်းတို့မှပေးပို့လိုသော လက်ဆောင်ကဒ်၊ ချောထုတ်များ၊ စာ၊ ဖိတ်စာ၊ အကြောင်းကြားစာများ၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ၊ရုံးတွင်း စာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံ၊ စိတ်ချ၊ လျှင်မြန််စွာ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက် သယ်ယူပေးကာ နောက်နေ့မှ စတင်ဖြန့်ဝေပေးပြီး (၂)ရက်နှင့်(၃)ရက် အတွင်း ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်နှင့် တနင်္ဂနွေမှအပ တစ်ပတ်(၆)ရက် ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ လက်ခံသူမှ စာများရရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးထားသော လက်ခံပုံစံများအား ပေးပို့ပြီးကြောင်း အထောက်အထားအဖြစ် ၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်များ အတွက် စာတစ်စောင်လျှင် (၅၀၀)ကျပ် ပိုမိုကောက်ခံပါမည်။
စာများ၊ပစ္စည်းများအားထုပ်ပိုးပြီးပေးပို့ရမည့်လိပ်စာအားကပ်ထားပေးရပါမည်။ စာများ၊ ပစ္စည်းများအား (၁)ကြိမ်သာ လာရောက် သယ်ယူပေးပါသည်။ Premier Mail ၏ ပုံမှန် အလေးချိန်မှာ (၅ဝဝ)ဂရမ် ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာ အလျား (၁၂) လက်မ၊ အနံ (၁ဝ) လက်မ၊ အမြင့် (၀.၅) လက်မအထိလက်ခံပါသည်။(ပုံမုန် ဂျာနယ် အသေးအရွယ်) စာလက်မခံခြင်း၊လက်ခံမည့်သူမရှိခြင်း၊လိပ်စာပြောင်းသောစာများအတွက်ငွေပြန်မအမ်းပါ။စျေးနူန်းအနည်းဆုံး (၁၅၀၀- ၁၈၀၀ - ၂၀၀၀) ကျပ်မှ စတင်ပြီး စာဝေနယ် ပြင်ပဧရိယာများအတွက် (၅၀၀) ကျပ် ပိုမိုကောက်ခံပါသည်။
Deliver within (4) or (5) days after collecting the shipments. Open six days inaweek (off on Sundays and also off on gazette holidays). We will provide delivery record to shipper. Delivery charges is (1000) Kyats per mail and will be more of the regular rate for Hlaing Tharyar, Shwe Pyithar, Dagon Myothit (South, North ), Mingaladon. Customers must pack and the destination address should be written on the package and mails. We will collect the shipment for free of charge. Weight limit is 500gms and the measurement should be within 6"(length) x 4" (width) x 0.5" (height). Not refundable for shipment for the wrong address and consignee already moved to another place.
Rate - 1000 Kyats per envelope for service area
Minimum (100 Mails)
တစ်ပတ်အတွင်းဝေ အမြန်ချောစာပို့စနစ် (စာစောင်အရေတွက် ၁၀၀ နှင့် အထက်)
လူကြီးမင်းတို့မှပေးပို့လိုသောလက်ဆောင်ကဒ်၊ ချောထုတ်များ ၊စာ၊ ဖိတ်စာ၊ အကြောင်းကြားစာများ၊ ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းများနှင့် အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံ၊ စိတ်ချ၊ လျှင်မြန််စွာ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် သယ်ယူ ပေးကာ နောက်နေ့မှ စတင်ဖြန့်ဝေပေးပြီး (၄)ရက်မှ (၇)ရက် အတွင်းပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်နှင် ့တနင်္ဂနွေမှအပတစ်ပတ်(၆ရက်) ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။လက်ခံသူမှစာများ ရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးထားသော လက်ခံပုံစံများအား ပေးပို့ပြီးကြောင်း အထောက်အထား အဖြစ်ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာ၊တောင်ဒဂုံ၊မြောက်ဒဂုံ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်များ အတွက် စာတစ်စောင်လျှင် (၅၀၀)ကျပ် ပိုမိုကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။စာများ၊ ပစ္စည်းများအား ထုပ်ပိုးပြီးပေးပို့ရမည့် လိပ်စာအားကပ်ထား ပေးရပါမည်။စာများ၊ပစ္စည်းများအားပေးပို့သူထံ(၁)ကြိမ်သာလာရောက်သယ်ယူပေးပါသည်။ (7) Days Delivery Service ၏ပုံမှန် အလေးချိန်မှာ (၅၀၀) ဂရမ်ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာ အလျား(၆)လက်မ၊ အနံ(၄)လက်မ၊ အမြင့်(၀.၅)လက်မ အထိ လက်ခံပါသည်။ စာလက်မခံခြင်း၊ လက်ခံမည့်သူမရှိခြင်း ၊လိပ်စာပြောင်းသော စာများအတွက် ငွေပြန်မအမ်းပါ။ စျေးနူန်းအနည်းဆုံး (၁၀၀၀)ကျပ်မှ စတင်ပြီး စာဝေနယ်ပြင်ပ ဧရိယာများ အတွက်(၅၀၀) ကျပ်ပိုမိုကောက်ခံပါမည်။
UCL –5kg Box
32cm x 24cm x 23cm
12in x 9in x 9in
Up to - 5kg Yangon, Naypyitaw, Mandalay - 10000 Kyats
Additional 1kg – 1000 kyats up to 10Kg
အမြန် ပိုု့ အထူးပုုံး
၁၀၀၀၀ ကျပ် နဲ့ ရန်ကုုန် ၊ မန်းလေး ၊ နေပြည်တော်သိုု့ နောက်နေ့အရောက် ပိုု့ ပေးနေပါသည်။ ၅ ကီလိုု အထိ ထည့် လိုု့ ရပြီး ၁ ကီလိုု ကျော်ရုုံဖြင့် ၁၀၀၀ က ျပ်သာ ပိုု ရုုံ သာ။ အထူး UCL5Kg , ပုုံးများဖြင့် ဒေသထွက် လက်ဆောင် များ ပိုု့ပေးနေပါပြီ။